2 Beresosɛm 35 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
2 Beresosɛm 35:1-27
35 Ɛnna Yosia+ dii twam+ afahyɛ maa Yehowa wɔ Yerusalem, na wokum twam guan+ no ɔsram a edi kan+ no da a ɛto so dunan.+ 2 Na ɔde asɔfo no sisii wɔn nnwuma so,+ na ɔhyɛɛ wɔn nkuran+ sɛ wɔnyɛ Yehowa fie adwuma+ no. 3 Afei ɔka kyerɛɛ Lewifo a wɔkyerɛkyerɛ+ Israel nyinaa, wɔn a wɔyɛ kronkron Yehowa anim no sɛ: “Momfa Adaka kronkron+ no nkosi ofie+ a Dawid ba, Israel hene Solomon sii no mu; enhia sɛ mosoa wɔ mo mmati so bio.+ Afei monsom+ Yehowa mo Nyankopɔn ne ne man Israel. 4 Munsiesie mo ho abusuafie abusuafie,+ mo nkyekyɛm+ so, sɛnea Israel hene Dawid kyerɛwee+ ne sɛnea ne ba Solomon kyerɛwee+ no. 5 Munnyinagyina+ kronkronbea hɔ mma mo nuanom, ɔman mma no, sɛnea wɔn agyanom abusuafie te,+ na Lewifo agyanom nkyekyɛm+ biara nnya ne de. 6 Munkum twam+ guan no, munnwira+ mo ho na munsiesie mo ho mma mo nuanom, na monyɛ sɛnea Yehowa asɛm a ɔnam Mose so kae no te.”+ 7 Afei Yosia de nguammaa ne mmirekyi nkumaa bae sɛ wɔmfa ne nyinaa mmɔ twam afɔre mma obiara a ɔwɔ hɔ, ɔman mma no nyinaa. Ne nyinaa dodow sii mpem aduasa, ne anantwi mpem abiɛsa.+ Eyi nyinaa fi ɔhene agyapade mu.+ 8 Ne mpanyimfo+ no nso fi wɔn pɛ mu de afɔrebɔde bae sɛ wɔmfa mmɔ twam afɔre mma ɔman no+ ne asɔfo ne Lewifo no. Hilkia+ ne Sakaria ne Yehiel, mpanyimfo a wɔwɔ nokware Nyankopɔn fie hɔ nso de twam mmoa nkumaa mpem abien ahansia, ne anantwi ahasa maa asɔfo no sɛ wɔmfa mmɔ twam afɔre. 9 Konania ne ne nuanom Semaia ne Netanel, ne Hasabia ne Yeiel ne Yosabad, Lewifo mpanyimfo no, de twam mmoa nkumaa mpem anum ne anantwi ahanum bae sɛ wɔmfa mmɔ twam afɔre mma Lewifo no. 10 Enti wosiesiee ɔsom ho nneɛma no,+ na asɔfo no gyinagyinaa+ wɔn gyinabea,+ na Lewifo no gyinagyinae, wɔn nkyekyɛm so+ sɛnea ɔhene ahyɛde te.+ 11 Na wokum twam guan+ no, na asɔfo+ no de mogya a wogyei no petepetee,+ na Lewifo no nso guaa+ mmoa no. 12 Afei nso wosiesiee ɔhyew afɔre no de maa ɔman mma+ no sɛnea wɔn agyanom+ nkyekyɛm te, sɛ wɔmfa nkɔ Yehowa anim+ sɛnea wɔakyerɛw Mose nhoma mu+ no; saa na wɔyɛɛ anantwi no nso. 13 Na wɔnoaa+ twam+ afɔrebɔde no wɔ ogya so sɛnea amane te; akronkronne no nso wɔnoae+ wɔ asɛn ne nkuku ne nsanka mu, na wɔyɛɛ ntɛm de brɛɛ ɔman mma+ no. 14 Ɛno akyi no, wosiesiee bi maa wɔn ho ne asɔfo+ no, efisɛ asɔfo no, Aaron mma no bobɔɔ ɔhyew afɔre+ na wɔhyew srade+ no kosii anadwo, enti Lewifo no siesiee+ bi maa wɔn ho ne asɔfo no, Aaron mma no. 15 Na Asaf+ mma nnwontofo+ no kɔɔ wɔn nnwuma so sɛnea Dawid+ ne Asaf+ ne Heman+ ne ɔhene dehufo+ Yedutan+ hyɛe no, na apon ano ahwɛfo+ no gyinagyinaa apon no nyinaa ano.+ Ná ɛho nhia sɛ wogyae wɔn nnwuma, efisɛ wɔn nuanom Lewifo no siesiee+ bi maa wɔn. 16 Wowiee Yehowa som ho nneɛma no nyinaa saa da no, na wodii twam+ no bobɔɔ ɔhyew afɔre Yehowa afɔremuka no so sɛnea Ɔhene Yosia hyɛe no.+ 17 Enti Israelfo a wɔwɔ hɔ no dii twam+ no saa bere no, na wodii paanoo a mmɔkaw nnim afahyɛ no nso nnanson.+ 18 Efi odiyifo Samuel bere so no, na wonnii twam bi sɛ eyi da wɔ Israel,+ na na Israel hene foforo biara+ nso nnii twam a ɛte sɛ nea Yosia ne asɔfo ne Lewifo no ne Yudafo ne Israelfo a wɔwɔ hɔ nyinaa ne Yerusalemfo dii no. 19 Yosia ahenni afe a ɛto so dunwɔtwe mu na wodii twam yi.+ 20 Eyinom nyinaa akyi, bere a Yosia siesiee ofie no wiei no, Egypt hene+ Neko+ bedii ako wɔ Karkemis,+ Eufrate ho. Na Yosia+ kɔe sɛ ɔne no de rekosi ani.+ 21 Ɛnna ɔsomaa abɔfo kɔɔ ne nkyɛn sɛ: “Dɛn na me ne wo wɔ yɛ, Yuda hene? Ɛnyɛ wo so na mereba nnɛ, na ofie foforo na me ne no rekɔko, na Onyankopɔn na waka akyerɛ me sɛ memma akomatu mmra. Onyankopɔn a ɔka me ho nti, sɛ wopɛ no yiye a san w’akyi, na mma ɔnnsɛe wo.”+ 22 Nanso Yosia annan amfi ne ho,+ na ɔsakraa+ ne ho sɛ ɔne no rekɔko, na wantie Neko+ asɛm a efi Onyankopɔn anom no. Enti ɔkɔɔ Megido+ tataw so ne no kɔkoe. 23 Na agyantofo+ tow agyan kɔwɔɔ Ɔhene Yosia, na ɔhene no ka kyerɛɛ ne nkoa sɛ: “Munyi me nsi fam na wɔapira me pira bɔne.”+ 24 Enti ne nkoa no yii no fii teaseɛnam no mu kɔɔ ne ko teaseɛnam a edi hɔ no mu de no kɔɔ Yerusalem.+ Saa na ɛyɛe na owui,+ na wosiee no n’agyanom asiei.+ Yuda ne Yerusalem nyinaa suu+ Yosia. 25 Na Yeremia+ twaa Yosia ho kwadwom;+ ɛde besi nnɛ, mmarima nnwontofo ne mmea+ nnwontofo no nyinaa da so bɔ Yosia din wɔ wɔn kwadwom mu; abɛyɛ ahyɛde wɔ Israel, na wɔakyerɛw wɔ kwadwom no mu.+ 26 Yosia ho nsɛm a aka,+ adɔe+ a ɔyɛe sɛnea wɔakyerɛw wɔ Yehowa mmara+ mu, 27 ne ne ho nsɛm, ne mfiase kosi n’awiei+ no, wɔakyerɛw ne nyinaa wɔ Israel ne Yuda Ahene Nhoma+ no mu.
2 Beresosɛm 35